अपराध Archives - SAMACHAR SANJAL
यी राशि हुनेलाई २०१८ मा यस्तो छ खतरा ! साढे सातको दशा ?-monsoon khabar
हराएको बाइस दिनपछि जंगलमा शव फेला ! मृत आत्माले शान्ति पाओस……
न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तत्काल न्यायपरिषद ऐन संशोधन हुन्छ : मन्त्री तामाङ्
कर्मचारीमाथि श्रममन्त्रीको कडाइ, १६ अटेरी कर्मचारीको हाजिरी रोकियो
View lalitbam101’s profile on Facebook
View lalitbam101’s profile on Twitter
View lalitbam101’s profile on Instagram
View lalitbam101’s profile on Pinterest
Breaking News:’डाेटीबासीले प्रदेश ७ को राजधानी नपाउने’
बजार सम्म बाईकमा लगि दिन्छु भनि जंगलकै बाटोमा किसोरीलाई बलत्कार
March 9, 2018 admin>
बाजुरामा बलात्कार आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिका–७ की १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा शुक्रबार विहान उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार बिहान घरबाट सामान किन्न बेतालमाडौं जादै गर्दा गाउँका दुईजना युवाले बाईकमा बजार लगिदिन्छु भन्दै किशोरीलाई बार्जुगाडु जंगलमा लगेर बलात्कार गरेका थिए । पक्राउ पर्नेमा बुढीगंगा नगरपालिकाका ३० वर्षीय चन्द्र विष्ट र २२ वर्षका सुनिल बिक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । किशोरीलाई ती युवाले उनको दाईको नाम भन्दै फलानोको बहिनी होईनौँ र हामी तिमीलाई चिन्छौ हिड बाईकमा पु¥याई दिन्छौँ छिटो…
एक किशोरीलाई बलात्कार गर्न खोज्ने पुरुषलाई मासु पसलमा लगेर लिङ्ग काटेर फालिदिए
भारतको राजस्थानमा एक किशोरीलाई बलात्कार गर्न खोज्ने पुरुषको यौनाङ्ग काटिदिएका छन् । राजस्थानस्थित गंगानगरमा आक्रोशित भीडले ती पुरुषलाई मासु पसलमा लगेर लिङ्ग काटेर फालिदिएका हुन् । ती व्यक्तिको नाम सुरेश कुमार बताइएको छ । किशोरले गुहार मागेको आवज सुनेपछि जम्मा भएको आक्रोशित भिडले लगभग ४० वर्षीय सुरेशलाई पिट्दै घसिटेर मासु पसलमा पुर्याएका थिए । उनलाई लगभग एक घण्टासम्म पिटिएको र त्यसपछि उनको लिङ्ग काटेर सडकमा त्यतिकै छाडिएको थियो । उनलाई अहिले अस्पताल भर्ना गरिएको छ । प्रहरीले उनको स्थिति निकै नाजुक रहेको बताएका छन् । भारतमा पछिल्लो समय बलात्कारको घटना…
नायिका बनाइदिन्छु भनेर दिउँसै गरे युवती लाई बलात्कार फ्लिम शैली प्रयोग गरि यस्तो गर्ने यिनी को हुन हेर्नुस! के गर्नी यसलाई?
March 8, 2018 admin>
काठमाडौं- किशोरीलाई नायिका बनाइदिन्छु भन्दै बलात्कार गरेको आरोपमा एक फोटोग्राफरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितवनको खैरहनी–१३ घर भई काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर बस्ने अमन तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। तामाङले आफू कलाकार भएको र धेरै निर्देशकसँग चिनेको विश्वासमा पारी किशोरीलाई नायिका बनाउने प्रलोभन दिएका थिए। फिल्मका लागि कुरा गर्न भन्दै होटलमा बोलाएर उनले किशोरीमाथि यौनशोषण गरेका हुन्। फरार रहेका तामाङविरुद्ध किशोरीको जाहेरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले पक्राउ गरेको हो। उनी पेसाले फोटोग्राफर भएको गौशाला वृत्तका डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताए। सुरुमा उनले किशोरीलाई नयाँ बसपार्कको होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेका थिए। पछि…
इटहरीबाट अटोमेटिक पेस्तोल सहित दुई पक्राउ
February 22, 2018 admin>
इटहरी । अमेरिकन मेड पेस्तोल सहित दुईजनालाई इटहरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सादा पोसाकको टोलीले इटहरी ५ जनता बस्तीबाट ९ एमएमको एक राउण्ड गोली र पेस्तोल सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा इटहरी ५ बस्ने बर्ष २२ को यामबहादुर लिम्बु र इटहरी ८ बस्ने बर्ष २१ को रोहन बस्नेत छन् । इटहरी ९ स्थित बसपार्कमा युवाहरु झगडा गर्न लागेको सुचनाको आधारमा प्रहरीको टोलीले निगरानी बढाएको थियो । सोही क्रममा लिम्बुको साथबाट युएस मेड अटोमेटिक पेस्तोल बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी संञ्जय राउतले जानकारी दिए ।…
को हुन् प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएका मनोज पुन? किन इन्काउण्टर भयो उनको?
February 21, 2018 admin>
रुपन्देही । गुन्डा नाइके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। बुधबार बिहान रुपन्देहीको देवदहमा प्रहरीको गोलीबाट उनी मारिएका हुन्। पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेर भाग्ने क्रममा प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रुपन्देहीका एसपी श्याम ज्ञवालीका अनुसार रुपन्देहीको देवहद नगरपालिका ४ भवानीपुरमा प्रहरीसँग जम्काभेट हुँदा आक्रमण गरी भाग्न खोज्ने क्रममा उनी मारिएका हुन्। उनीसँगै उनका सुटर सोमबहादुर आलेको पनि मृत्यु भएको छ। उनीहरु दुबै जनाको शव अहिले लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ। सिआइबीको टोलीले मनोज पुनको समूह नेपालमै लुकिछिपि बसेको सूचना दिएपछि रूपन्देहीले सम्भावित ठाउँको…
गुन्डा नाइके मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा यसरी मारिए
९ फागुन, काठमाडौं । गुन्डा नाइके मनोज पुनसहित दुई जना प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । रुपन्देहीको देवदहमा पुनसँगै उनका सहयोगी सोम आले पनि मारिएका छन् । सोम आले मनोज पुनका सहयोगी हुन् । एसएसपी दीपक थापाका अनुसार उनीहरु नेपाल आएको सीआईबी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले पत्ता लगाएपछि सर्च अभियान चलाएको थियो । सोक्रममा देवदह नगरपालिका ४ भवानीपुरमा प्रहरीसँग जम्काभेट भएको थियो । त्यसपछि पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीलाई आक्रमण गर्दै भाग्न खोजेपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको थापाले जानकारी दिए । घटनास्थलमा गोली लागेर घाइते भएका दुबै जनालाई तत्काल उपचारको लागि लुम्विनी…
प्रहरी झुक्याउन गाँजा कारोबारी महिलाको अचम्मको नाटक
February 19, 2018 admin>
६ फागुन, वीरगञ्ज । प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका २८ बाट २८ किलो गाँजासहित ४० वर्षीया सावित्रीदेवी सहनीलाई पक्राउ गरेको छ । उनले प्रहरीलाई झुक्याउन नाटकीय ढंगले प्रस्तुत भएको प्रहरी बताउँछ । घटना विवरण अनुसार महिलाले घरमा गाँजा राखेको जानकारी पाएपछि प्रहरी टोली खानतलासीका लागि पुगेको थियो । तर महिलाले शुरुमा आफ्नो घरमा गाँजा नभएको भन्दै प्रहरीलाई घरमा पस्न नै दिइनन् । प्रहरी टोली हैरान भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा घरमा पसेको थियो । घरभित्र पसेर सर्च गर्दा गाजा भेटिएन । अन्तमा प्रहरी सुत्केरी महिला राखिएको भनिएको ठाउँमा पुग्यो । तर त्यहाँ सुत्केरी…
नेपाल प्रहरीको सीआईबीले पक्राउ गर्यो काठमाडौँमा १२ जना नक्कली डाक्टरहरु
February 13, 2018 admin>
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा छापा मारेर १२ जना ‘नक्कली डाक्टर’ लाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ परेकाहरुको विवरण भने गोप्य राखिएको छ । आज सीआईबी ले मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको समन्वयमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।प्रहरीका अनुसार उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेकाले विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । ’नक्कली डाक्टरको छानबिन बिगत १ बर्ष पहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र तत्कालीन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को सहकार्यमा ८ सय ९ जना डाक्टरको प्रमाणपत्र छानविन गरिएको थियो ।तीमध्ये एक सय ९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली…
सहकारीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौँ, २८ माघ । सहकारीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा साइरीयस बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मुकुन्दलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालीमाटी महानगरीय प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपकुमार क्षेत्रीले २०० भन्दा बढी व्यक्तिको रु एक करोड १९ लाख ठगी गरेको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो । सोभन्दा धेरै रकम उनले ठगी गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । साइरीयस सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र साइरीयस कलेजका पूर्वअध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले कलंकी, रामकोटलगायतका क्षेत्रका बासिन्दाको रकम ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो । नायब उपरीक्षक क्षेत्रीले…
श्रीमती भन्छिन, ‘मसँग धेरै सेक्स नगरे अर्को सँग जान्छु’ पिडित श्रीमान पुगे अदालतपुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
February 11, 2018 admin>
काठमाडौ। आफ्नी श्रीमतीको सेक्सप्रतिको आशक्तिका कारण श्रीमान निकै तनावमा परेका छन् । उनको यो आशक्तिबाट छुटकारा पाउनका लागि श्रीमानले अनेकौँ उपायहरुको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । श्रीमानको आरोप छ कि उनकी श्रीमती उनीसँग हदभन्दा बढी सेक्स गर्दथिन् । पिडित पतिले अन्ततः अदालतको ढोका ढक्ढकाए र सम्बन्धविच्छेदको लागि पहल गरे । भारतका ‘फेमिली कोर्ट’का न्यायाधिस लक्ष्मीकान्त रावका अनुसार श्रीमती अदालतमा पेश भएकी छैनन् । अदालतले यसैको आधारमा श्रीमानको समस्यालाई सहि मान्दै सम्बन्धविच्छेदको लागि अनुमती दिएको छ । कामुक औषधी खुवाउँथिन् श्रीमती श्रीमानले अदालतलाई बताए अनुसार उनकी श्रीमती उनीसँग सेक्स गर्नका लागि…
ब्लड क्यान्सर पीडित ४ बर्षे बालिका क्रिष्टिना सुनुवारको उपचारको क्रममा निधन भएपछि आमा यसरी मुर्छित परिन , हेर्नुहोस यो भाबबिहिन दृश्य (भिडियो)-
हेर्नुस नाङ्गा बाबालाई कपडा नलागाएर हिड्ने भन्दै चुट्दै
पाथिभरा माताको नाम लिई आज मिति २०७४ फाल्गुन ९ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस र आफ्नो भाग्य थहा पाउनुहोस
मासिक १० लाख रुपैंयाँ कमाउने गायिकाको घर पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
छिटो छिराऊनु न ! आज म तपाईको इच्छा पुरा गरिदिनछु!”
गाइको गहुँत बाट १४८ रोगको औषधि भएकाे रुसी वैज्ञानिकको निष् कात्तिक, काठमाडौं ।
साँझपख कपिलबस्तुमा मुटु काम्ने दुर्घटना ! अवस्था यस्तो छ …
हिन्दु धर्मावलम्वीद्वारा पवित्र मान्ने गाईको तस्करी गरि गाई काटेको भेटेपछि, गाई काट्नेलाई नै हिन्दुले गरे कुटेर हत्या(भिडियोसहित)
नेपाल प्रहरीका ‘एसपी साप ले गरे पुरै प्रहरीकै बेइज्जत
भारतले महाकाली नदी माग्यो, अब के गर्छन ओली ?
कर्णाली प्रदेशमा एनजीओ ‘आउट’ : फेसबुक बन्द
३०० जनालाइ ठगी गर्ने मेनपावर संचालकलाई युवाले वैदेशिक रोजगार बिभागमै यसरी थुने !
प्रदेश १ को बजेट चैत १५ पछि, आज आर्थिक कार्यबिधि ऐन पेश हुने
माछापोखरीमा जुम्लाकी युवतीको १० लाख लुटियो
माटोको ढिस्कोले पुरिएर ३ वर्षे बालिकाको मृत्यु, एक गम्भीर
मन्त्री विनाको दावीः मेलम्चीको पानी दशैंअघि नै काठमाडौंका घरघरमा
Categories Select Category English (2) Mobile (2) News (17) SEXY (2) Technology (3) अनौठो (147) अपराध (16) कथा (5) खेल्कुद (25) चुनाब (99) दुखद (355) देश (171) फिल्मी समाचार (60) बिदेश (9) मनोरंजन (83) राजनीति (293) राशिफल (29) आजको राशिफल (29) रोचक समाचार (139) विश्व (7) समाचार (2,111) समाज (32) सेक्सी कथा (8) सेक्सी न्युज (44) स्वास्थ्य (14)
Our Catagories Select Category English Mobile News SEXY Technology अनौठो अपराध कथा खेल्कुद चुनाब दुखद देश फिल्मी समाचार बिदेश मनोरंजन राजनीति राशिफल आजको राशिफल रोचक समाचार विश्व समाचार समाज सेक्सी कथा सेक्सी न्युज स्वास्थ्य
Author : LalitBam
Address : Dhangadhi-1,Kailali,Nepal
Email : lalitbam101gmail.com
contact no : 9804638581/ 9846885382
Touch On Social Media
Officially Designed By -LaL i T